Ogaden News Agency (ONA) – Boko Xaram oo Qaraxyo Ka Gaystay Wadanka Nigeria.
Boko Xaram oo Qaraxyo Ka Gaystay Wadanka Nigeria.
Kooxda Xagjirka ah ee Boko Xaram oo ka dagaalanta waqooyiga dalka Nigeria ayaa shalay sadex weerar oo ismiidaamin ah ku dilay in ka badan 60 qof oo rayid ah. Weeraradan ayaa ka dhacay magaalada Maiduguri ee waqooyi-bari Nigeria.
Mid kamid ah qaraxyadan ayaa loo adeegsaday gabar loo soo dhiibay bambaano oo isku qarxisay suuqa magaalada Maiduguri. Qaraxaasi ayey ku dhinteen ugu yaraan 27 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof. Labada qarax ee kale ayaa ka dhacay nawaaxiga xarun lagu hayo dad baro kacayaal ah, halkaasi oo la rumeysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 30 qof, dhaawacuna uu ka badan yahay 45 ruux.
Weeraradan ayaa lagu soo beegay xili ay ciidamada dowlada Nigeria ku guuleysteen inay kooxdaasi ka saaraan dhul badan oo ay horey u heysteen, waxayna Boko Xaram hada dar dar gelisay weerarada ismiidaaminta ah oo ay inta badan u adeegsadaan gabdho aad u da’a yar oo ay afduubteen.